बैतडी – पछिल्लो समय बैतडीमा स्क्रब टाइफसका बिरामीको संख्या बढेको छ । वर्षायामको सुरुबाटै बिरामीको संख्या बढेको हो । विगतका वर्षमा फाट्टफुट्ट मात्र देखिए पनि यो वर्ष स्क्रब टाइफसका बिरामीको संख्या धेरै रहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये दैनिक चार जना जतिलाई स्क्रब टाइफस देखिने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी हरिश पन्तले बताए ।
उनले भने, ‘केही समयअघिबाट दैनिक देखिने गरेका छन ।’ जिल्ला अस्पतालबाट रेफर गरेका केही बिरामीहरूमा डेंगु पनि देखिएको अस्पतालले बताएको छ ।
केही स्क्रब टाइफसका बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना नै गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशी बताउँछन ।
‘अनिवार्य परीक्षणले पनि बढी देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘अस्पताल आउने ज्वरोका प्रत्येक बिरामीमा क्रब टाइफसको परीक्षण गरिरहेका छौं ।’ यस्तै जिल्लामा भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या पनि बढेको छ ।
जिल्ला अस्पतालमा मात्र दैनिक २५ भन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका अस्पतालले जनाएको छ । भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका ज्वरोका बिरामीहरू पनि छन ।
दिनमा ५ जनासम्मलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेको सूचना अधिकारी पन्त बताउछन ।
यस्तै जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या धेरै छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ मा रहेको पञ्चेश्वर स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज सुरेश सार्कीले बताए ।
उनका अनुसार दैनीक २० जनाभन्दा बढी ज्वरोकै बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भाइरल ज्वरो देखिएको उनले बताए । शुक्रबारसम्म मात्र १७ जना ज्वरोको बिरामी चेकजाँच गरेको उनको भनाइ थियो ।
वर्षात्को समयमा फोहर पानीको प्रयोग र गाउँमा कामकाजका बखत पानीमा धेरै समय भिज्न पर्ने बाध्यता रहेकाले भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको हुन सक्ने उनले बताए ।
केही दिनयताबाट आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू अघिपछिको तुलनामा धेरै आउन थालेको पुरचौडी नगरपालिका–४ को भटना स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज रोहित धानुक बताऊँछन ।
असारबाट सुरु भएर असोजसम्म भाइरल ज्वरो जस्ता रोगहरूको प्रकोप देखिने गरेको जिल्ला अस्पतालका डा. जोशी बताउँछन ।
वर्षातमा पानीका मुहानहरू सफा नहुँदा पानीजन्य रोगहरू देखापर्ने गरेको उनले बताए । यो समयमा किर्नालगायतका किराहरूले टोक्ने भएकाले स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू पनि देखिने गरेका उनी बताउँछन ।
स्क्रब टाइफसले ज्यानै लिन सक्ने भएकाले परीक्षणको दायरा बढाएर उपचार गरिरहेको डा. जोशीले बताए ।